Namuhla sizoxoxa nawe ngalokho kukhona izakhiwo "Klondike". Kuyinto ngempela Umbuzo othakazelisayo lowo, ngoba noma iliphi ithoyizi, kukhona isakhiwo evamile futhi "ibhonasi". Sizobe ukukhuluma ngamunye wabo.
Yiqiniso, kunoma iyiphi umdlalo, kukhona izinto ezifana nezindlu zokuhlala. Avame imali. In the game "Klondike", le "umkhakha" isetshenziswa kudume ngazo nabangani bese inzuzo. Sekukonke kukhona 11 izinhlobo ezahlukene zezakhiwo, kusukela palatochki linesizotha kakhulu ngokumpompa izindlu ezinkulu.
Yiqiniso, ukuze kwakhiwe edingekayo ezinye izisetshenziswa. Ngokwesibonelo, ukuze ime iqonde ngokugcwele etendeni, kubalulekile isitoko 1,000 igolide, amatshe 5, izingcezu zobumba 3, 5 no-5 izingodo ngesihlahla sonwele saseYurophu emi amabhodi, izikopelo 3 no-3 amabhodi ezivamile. Ngaphezu kwalokho, uzodinga izicubu. It is etholwe inhlangano umvukuzi iqoqo noma ukuphotha. Kodwa ukuze kwakhiwe ifa adinga izimali eziningi izinto ezisezingeni eliphezulu. Ngokuvamile, basuke akhiqizwa workshop ezahlukene. Ngaphezu kwalokho, "Klondike" - umdlalo lapho izakhiwo ezintsha zitholakale yokwandisa izinga futhi ukusebenza imisebenzi ethile. Khumbula ukuthi ezinye izindlu ingatholakala njengoba umvuzo.
Ngokungangabazeki, ukwakhiwa umdlalo "Klondike", njengoba kwezinye izinhlelo zokusebenza eziningi ube esigabeni izakhiwo "yezinkathi ezithile." Ziyakwazi ngokuvamile ezitholakala ngezikhathi ezithile zonyaka, futhi ngesikhathi esithile (isibonelo, usuku olwandulela uNcibijane noma Day Valentine). Ake sibone ukuthi yini isakhiwo ingabuye yenteke ngesikhatsi izenzo nemikhosi.
Snowman - ekwakheni, ngoba ofuna iqhaza abangane. Ngaphandle kwawo "snegovichka abayizimpumputhe" ngeke zisebenze. Kuyadingeka ukuze kwakhiwe snowdrops. Ngemva Mashi 8 mhlawumbe abe entabeni izipho.
Buildings "Klondike" zihlanganisa iphethini herringbone. It is eyakhelwe abangani izipho ezincane ezihlukahlukene loNyaka Omusha. isakhiwo sesikhashana. Kuyatholakala ukuthi kuthengwe ngamaholide kaKhisimusi.
Kukhona futhi play izakhiwo ezahlukene for Day Valentine sika. Njengomthetho, ke Balloons, izinhliziyo, imifanekiso eqoshiwe ngesimo izinhliziyo noma izimbali. Ngokuvamile, ukwakhiwa okunjalo "Klondike" ukunikeza ithuba ukudlala roulette noma umane ukuhlobisa ingaphakathi.
Ethandwa kakhulu kukhona ekhaya nge izipoki kwemibhoshongo isignali, okukuvumela ukuba uthole izipho Halloween. Indlu Haunted, ngasendleleni, ungakha ezihlukahlukene izinto zokwakha kwamanye izakhiwo ngesikhathi amasheya ngemva Hellouna.
tank Golden - kuba isakhiwo ezithakazelisayo "Klondike", okuyinto lakhiwa ngesikhathi wasemuva we Day lawobaba. Naye, njengoba nabo bonke abanye, ungakwazi ukuqoqa izipho. Nokho, ukwakha ezifana elementi Decor kunzima ngempela - ke lidinga imininingwane owenza izitshalo.
"Klondike" - umdlalo lapho abadlali sonke isikhathi kudingeka ukuthuthukisa umnotho walo futhi kukhishwe ezinye izisetshenziswa. Ukuze wenze lokhu, ungakha zonke izinhlobo zosizo. Isakhiwo esiyisisekelo lapha - okubizwa ngokuthi esibayeni. Kudingeka udale ngokushesha lokho ezinye izakhi ngaphandle ukuqasha zabasebenzi. In the game "Klondike" ukwakhiwa esibayeni kwenzeka 4 izigaba. Lapho kudalwa usuphothuliwe, umdlali uzothola ithuba elihle kakhulu "ukukhiqiza" izakhi game imisebenzi kanye nezinye izakhiwo.
Ungathola futhi kulesi sigaba of the inkwali kanye sokukhanda. Ngaphezu kwalokho, ezihlukahlukene izitshalo zitholakala lapha. Ngokwesibonelo, i-ekukhiqizeni ubisi noma zobumba. Ungakwazi kalula uthole amabhodi, kokuba eyakhelwe amapulangwe futhi ukwakha isizinda noma yiziphi izinto uthenge ngokusebenzisa wakha isitshalo Metallurgical wena. Lapha ungathola incubator, okuyinto livumela "umlilo".
Phakathi kwezinye izinto, ungakwazi ukwakha insimu yayo, ebhikawozi nefektri "Choco Pie". Lezi izakhiwo "Klondike" kuyadingeka ukuze kuphothulwe ukwakhiwa esibayeni, njengoba bengeke bakwazi ukwenza khekhe, okuyinto yena, kubalulekile izinqolobane.
Kodwa in umdlalo wethu namuhla kukhona ezinye izinto ukusiza ekuthuthukisweni zezitshalo nezilwane. Esikhathini project 'Klondike "10 izakhiwo asizayo enikeziwe. Lezi zihlanganisa:
yemifino eziyinkimbinkimbi futhi superkompleks;
indlu nge labaqaphi;
inja nge idokodo;
Ngakho, uyokwazi ukuvikela insimu yalo kusuka nezilokazane ukuqoqa / ukukhiqiza izinsiza ukuthi udinga isikhathi. Ngokwesibonelo, uma uvumela nekatshana 25 amathini ubisi, sizoqala ukuqoqa amaqanda kule henhouse. Gardener ukuchelela kusiza ukususa ngokushesha isivuno izihlahla nemifino izakhiwo - ne imibhede. Trade Shop udinge ukwabelana izinsiza nabangani. Kodwa kukhona esinye isigaba zezakhiwo kule mdlalo.
Esikhathini "Klondike" Kukhona 16 izipho ezehlukene ezweni evulekile. Avame angatholwa ngoba impumelelo ethile. 4 kukhona abakhona phakathi izakhiwo idatha. Bahlanganisa umhlobiso okukhethekile futhi inikeza zezimfuno ezithile. Njengoba umthetho, ngokuba ukuhlanzwa izwe elithile kusuka imithombo.
Buildings "Klondike" ngoba impumelelo - kulendlu esiyingqayizivele. Ezinye zazo enze kube nokwenzeka ukuba ukudlala roulette, abanye - izinsiza likhiqiza futhi izinto, futhi abanye, nabo bonke ahlotshiswe. Lapha ungathola:
Njengoba e "Maynkraft" ukwenza eshalofini, futhi isho ukuthini ukukhonza?
Game eside BRB. Kusho ukuthini? Lapho esetshenziswa?
Ukudlula "Creed Assassin: Ubuzalwane Segazi" - kuyoba mnandi!
"Izwe elingenamingcele" ("MTS"): incazelo, ukukhishwa, uxhumano lwensizakalo
Tattoo ukususwa: izindlela ethandwa kakhulu
Izigaba main ekuklanyweni kwezakhiwo kanjalo nezinhlaka
Yidla A uhlobo ukuthenga umuzi?
Shoes "Vitachi": isithunzi brand
Ukudla Estonia: imithetho, ugesi wesifunda, imenyu anolaka, ukubuyekezwa